Homeमनोरञ्जनखोला विरुद्ध नै मुद्दा किन हाल्न खोजे निश्चल बस्नेतले ? (हेर्नुस भिडियो)
October 14, 2019 Spnews मनोरञ्जन, समाचार Comments Off on खोला विरुद्ध नै मुद्दा किन हाल्न खोजे निश्चल बस्नेतले ? (हेर्नुस भिडियो)
हेमराज वीसी द्वारा निर्देशित चलचित्र ‘घामड शेरे’को ट्रेलर सार्वजनिक भएको छ । सोमबार काठमाण्डौमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै कात्तिक ८ गतेबाट रिलिज हुने चलचित्रको ट्रेलर रिलिज गरिएको हो ।
चलचित्रको शिर्ष भूमिकामा कलाकार निश्चल बस्नेतले काम गरेका छन् । चलचित्रमा एउटा खोलाको लागि मुद्दा हाल्ने पात्रको भूमिकामा निश्चललाई देखाइएको छ ।चलचित्रमा नायिका स्वस्तिमा खड्का, कलाकार सुष्मा निरौलाको साथमा नायिका गौरी मल्लको विशेष भूमिका छ ।
हेमराज वीसी र सिमोस सुनवारको लगानीमा तयार भएको चलचित्रमा निश्चललाई जे कुरामा पनि फरक र जिद्दी व्यवहार देखाउने पात्रको रुपमा देखाइएको छ । नायिका स्वस्तिमा खड्का भने चलचित्रमा निश्चलकी सालीकी भूमिकामा देखिएकी छिन् ।